Geeri Aakhiro ama Guusha Nololeed[ Qore: Mohamed Abdirizak Ali_Faallo] | SAHAN ONLINE
1. Waa maxay Amni?
Waa is aaminid madax iyo shacab.
2. Sidee looga guul gaari karaa amni xumadda soo noqnoqonaysa ee ka jirta caasimadda dalka ee Muqdisho?
Dowladda Soomaaliya maanta awoodeedu waxay ku sugan tahay kuna kooban tahay magaaladda Muqdisho,halka amni xumadda ugu weyna ay ka jirto magaalada Muqdisho oo ay dhibaatada ugu weyn ka geystaan kooxdda Al-Shabaab,kuna dhintaan dadka waxtarka u ah bulshadda Soomaliyeed,waxaana tusaale ahaan loo soo qaadan karaa qaraxii 14-ka October 2017-ka,waa maalin xusuus iyo murugo ku reebtay Shacabka Soomaaliyeed dL iyo dibadba,waa maalintii gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Qaraxaasi dadka ku dhintay iyo iyo kuwa ku dhaawacmay waxay gaarayaan 1000 qof.
Sidaa darteed ayaa qormadeyda diiradda ku saaraayaa magaalada moqdisho, waayo haddii dowladdu sugto,kuna guulaysato amniga caasimadda,waxaa u fududaaneysa inay dalka intiisa kalena ku guulaysto amnigiisa.
Waxaa jira tubo badanoo amniga caasimadda lagu suggi karo, laakiinse anigu waxaan aaminsahay hadii 10 qodob oo kaliya la dhaqangeliyo in amniga caasimadda wax badan laga qaban karo:_
Wacyi galin bulsho oo xoogleh ayna ka qayb qaataan Culimadda, Saxaafadda, waxgaradka, aqoonyahadda iyo dhamaan qaybaha bulshad oo dhan.
Kooxdda Shabaab oo la Cirib tiro ama ugu yaraan laga xorreeyo Shabeelooyinka waayo aad ayey u adagtahay in Muqdisho amnigeeda lasugo,iyadoo labada Shabeelo badankooda ay ka taliyaan kooxdda Al-Shabaab,qaraxyada ugu badana laga soo abaabulo deegaanadaas.
In dib u habayn iyo tayeyn lagu sameeyo hay’addaha amniga gaar ahaan howl galinta wardoonka, hay’adda nabadsuggidda Soomaaliya.
In la howlgaliyo,lana xoojiyo amniga heer degmo ilaa heer xaafaded iyadoo la adeegsanayo ciidamo madani ah(Shacab).
In sameeyo shaqo abuur:- in badan oo kamid dhalinyarada lamarin habaabiyey, waxaa u geeyey dan iyo daruuf waayonhadda ka hor ayaa la waraystay mid kamid ah dhalinyaradaas isagoo faldanbiyeed gacanta kula jira,wuxuuna hadalkiisa kusoo koobay sidaan “”Inaan dhinto iyo inaan noolaado waa isku kay mid waayo waxaan ku noolahay nolol ay dhimashadu ka qiimo badantahay nolosha” sidaad darteed waa in shaqo abuur loo sameeyaa dhalinyaradaas.
Waa in dawladdu wada shaqeyn dhaw la yeelata shirkadaha Isgaarsiinta dalka,waa meesha kaliya ee dambiilaha laga soo tix raaci karo maadaama uusan jirin diiwaan ama aqoonsi guud oo dadka kala saari kara.
In magaalada daafaheeda laga dhiso goobo cayiman oo la dhigo qalab lagu baaro baabuurta iyo weliba in la geeyo eyda urisa qaraxyada.
Waa in la dhisaa golle ama gudi daba gal ku sameeya in saraakiisha amaanku gudanayaan waajibkooda, guddigaas oo ka kooban dhammaan qeybaha bulshada.
Waa in la sameeyaa diiwaan gelin electronic ah oo ah dadka iyo gawaarida caasimada Muqdisho.
Waa in ganacsatadu ay qeyb libaax leh ka qaadataa dadaalka loogu jiro in lagu xasiliyo caasimada waayo haday caasimadu xasisho dalkuna wuu xasilayaa ilaahay idankii dawladuna waa inay ganacsatada soo dhawaysataa si ay ula yeelato wada shaqeyn dhaw.
Waxaa muhiima oo biyo kama dhibcaana dowladdu inay ku kali noqoto haysashada iyo adeegsiga hubka iyadoo meesha ka saareysa baahidii keentay inay dadku is hubeeyaan.
Sidoo kale haddii Hay’addaha sirdoonka reer galbeedka sida FBI Mareykanka iyo MI6-ka Ingiriiska aysan daacad ka ahayn garab istaaga hay’adaheena amni, maxay tahay sababta naga hortaagan inaan xiriir la samayno Hay’addaha sirdoonka MIT ee (Turkiga) iyo FIS oo (Ruushka ah) si ay farsamo ahaan nooga caawiyaan arimaha amnigga.
Qalinkii : Mr. Mohamed Abdirizak.
Qoraagga ayay gaar u tahay ,looma fasiran karo aragtida Sahan Online